လင်္ကာ: တွယ်ရာမဲ့ပန်းတို့ ၏ မုန်တိုင်းချက်များ
တွယ်ရာမဲ့ပန်းတို့ ၏ မုန်တိုင်းချက်များ
ဟသာင်္တမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့၉ နှစ်သားခလေးငယ်တယောက်အပေါ်လူမဆန်စွာညှင်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့သ တင်းတွေအင် တာနက်စာမျက်နှာတွေပေါ်ကတဆင့်ဖတ်လိုက်ရတဲ့အခါကျနော်အရမ်းတုန်လှုပ် သွားမိ တယ်။ခလေးငယ်အတွက်အတော်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ဒီလို အိပ်မက်ဆိုးတွေ ကို ကျနော်တခါ ကကြုံခဲ့ ဘူးပါတယ် ၊
စစ်အာဏာရှင်များရဲ့ထောက်လှမ်းရေးစစ်ကြောရေးစခမ်းထဲမှာပါ၊ဒါပေမဲ့အခုခံလိုက်ရတဲ့ခလေးငယ်လောက် မခံခဲ့ရပါဘူးလူတစ်ယောက်က လူတစ်ယောက်ကို အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျပြီး ရက် စက်ခဲ့လို့နာကျင်ခဲ့ရ တဲ့ ပုံရိပ်ဆိုးတွေကိုကျနော်ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်…….….အခုခလေးငယ်က၉နှစ်သားလေး……စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ ဗျာ………တညလုံးလုံး….ကြိုးနဲ့တုတ်…ပါးစပ်ကိုဆို့ထား….တုတ်ချက်တွေနဲ့ပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်လို့…အော်လို့ ကလည်းမရ…ပြန်ရုန်းထွက်ဖို့လည်းအားမသန်….နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့နှိပ်စက်လိုက်တာ….အယုတ်မာဆုံးခွေး ချေးတွေ…လူ့ကျင်ငယ်ရေတွေကိုတောင်ပါးစပ်ထဲထည့်လို့….ခံစား နေရတဲ့မြင်ကွင်း၊ကြောက်ရွံ့အားငယ်
ထိတ် လန့် ငိုကြွေးနေ မဲ့ သဏ္ဍန်တွေကိုစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ကြည့်မိတိုင်း ကျနော်ရင်နင့်မိတယ်…….
စက်သင့်ပါဘူးဗျာ….ဒါ..လူမဆန်တဲ့လုပ်ရပ်တခုပါ….လူနဲ့တိရိစ္ဆာန်ကိုအဓိကပိုင်းခြားထားချက်ထဲမှာ…ကိုယ် ချင်းစာတရား….တိရိစ္ဆာန်လောကမှာဥပဒေတခုပဲရှိတယ်…ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်း………တရားတာမတရားတာတွေ သူတို့မသိဘူး….အင်အားကြီးသူကအင်အားနည်းသူကိုအနိုင်ကျင့်မယ်….အဆိပ်ရှိသတ္တ၀ါက..အဆိပ်မဲ့သတ္တ ၀ါကိုအနိုင်ကျင့်မယ်…ဒါသူတို့လောက….လူဟာတိရိစ္ဆာန်မဟုတ်ဘူး..ဒါရှင်းပါတယ်….ဒါပေမဲ့…လူဖြစ်လင့်ကစား.တိရိစ္ဆာန်အကျင့်ကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်..လူ့တိရိစ္ဆာန်ပါပဲ…….ကျူးလွန်သူတရားခံရဲ့ယောက္ခမလုပ်တဲ့သူ ကပြောတဲ့စကားလည်းသုံးသပ်ကြည့်ပါဦး….ခလေးငယ်ကိုအကျင့်ပျက်တယောက်လိုစွပ်ဆွဲပြောဆိုထားတယ်…..ထား….အကယ်ရွေ့…ကျူးလွန်ခဲ့ရင်တောင်မှ..အဲသလိုရက်စက်ဖို့လုပ်ပိုင်ခွင့်…ခင်ဗျားတို့မှာရှိသလားလို့ကျနော်မေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်…..
ဌေးဝင်းခေါ်စနိုးရဲ့အနာဂါတ်ကိုလည်းစောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦး…..သူရက်စက်လိုက်တာတစ်ညထဲပါ….သူခံရမှာ ကရက်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီခံစားရမှာပါ…..ခလေးငယ်ရဲ့ဒဏ်ရာတွေဟာနောက်ခြောက်လလောက်ဆိုပျောက် ကင်းသက်သာနေလောက်ပါပြီ…..ကျနော်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဘ၀နဲ့နေလာခဲ့တော့… အသိတခုရလာတာရှိတယ်…..လူတစ်ယောက်ကိုသတ်ဖြတ်လိုက်တာတို့…ရိုက်နှက်အနိုင်ကျင့်လိုက်တာ တို့ဆိုတာတွေဟာ..အတော်တွက်ခြေမကိုက်တဲ့လုပ်ရပ်ပဲဆိုတာပါပဲ….ဆိုပါစို့….လူတယောက်ကိုအကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့်သတ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆို….ခံရတဲ့သူကခနလေးပဲခံစားပြီး…လူ့ပြည်ကပျောက်ဆုံးသွားပြီ…. လုပ်တဲ့ သူက…အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ..မလွတ်မခြင်း..လူ့ငရဲခံရပေတော့ပဲ…..လူတွေခနခဏပြောနေကြစ ကားရှိပါတယ်…“မိုက်တယ်ဆိုတာလွယ်ပါတယ်တဲ့”တကယ်တော့မိုက်တယ်ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး….ရခဲလှတဲ့ လူ့တဘ၀လုံးကိုအကျိုးမဲ့စွာအဆုံးခံရဲမှ…မိုက်လို့ရတာပါ…..အဲဒီတော့ မလွယ်တဲ့ကိစ္စတခုကိုရှောင်တာ အကောင်း ဆုံးပါပဲ……..
ကြောင့်ပြန့်နှံ့နေ ပါပြီ….ကရုဏာသက်စွာခလေးငယ်ကိုလှုဒါန်းကြတဲ့သူတွေ ကို..ကျေးဇူး လည်းတင် တယ်…ပီတိ လည်းဖြစ်မိတယ်…..ဒါကိုယ်ချင်းစာတရားရှိတယ်ဆိုတဲ့….လူ့ပုံရိပ်ကိုလှစ်ပြလိုက်တာပါပဲ……
သားချင်းစာနာတတ်တယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြပေးစေချင်ပါတယ်….ဒီလူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအားပေး အားမြှောက်ပြုစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး….ဒါဟာတရားဥပဒေအပြင်..လူမူ့ဒဏ်ခပ်ခြင်းတမျိုးပါ……..ကျနော် ရင်ထဲစိုးရိမ်မှုတခုက…ထောင်တွေထဲမှာ..အင်မတန်မှဆိုးသွမ်းတဲ့..လူဆိုးတွေ..တော်တော်များများကိုလေ့ လာကြည့်တဲ့အခါ….မိဘမဲ့နဲ့ရှင်သန်ရတဲ့သူတွေများနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်….ဒါ့အတွက်မိဘမဲ့ခလေးငယ်များ ကိုအရမ်းကိုစိုးထိတ်မိပါတယ်……တခါကအသံလွှင့်ဌာနတခုကလွှင့်သွားတဲ့နာဂစ်အကျိုးဆက်သတင်းလေး တခုအင်တာနက်ကတဆင့်ကြည့်လိုက်ရပါတယ်….ခလေးငယ်လေးသုံးဦး ၊ အကြီးဆုံးက ယောကျာင်္လေး ( အသက်မှ ၁၂ နှစ်လောက်ပဲရှိမယ် )နောက်မိန်းခလေး ( ၆ နှစ်လောက် ) အငယ်ဆုံးလေးကလည်း မိန်းခလေး ( ၃နှစ်သမီးလောက်ပဲရှိမယ်)၊မိဘတွေအားလုံးနာဂစ်ကြောင့်သေဆုံး သွားကြတယ်…ဒီခလေး ငယ်လေးသုံးရောက်ထဲကအကြီးဆုံးကောင်လေးက….ဂဏန်းကောင်တွေသွားဖမ်းပြီးပြန်ရောင်း…ရတာလေး နဲ့မောင်နှမတတွေအသက်ဆက်နေရတယ်…ဂဏန်းဖမ်းလို့မရတဲ့နေ့တွေဆို….သူတို့လေးတွေ…ထမင်းအ ငတ်နေရရှာတယ်………သူတို့လေးတွေရဲ့အနာဂါတ်ကိုဘယ်သူစောင့်ရှောက်မလည်း…………….ဘယ်သူတွေ ကတာဝန်ယူမလည်း တွေးမိတိုင်း ရင်မောစရာပါ…..
ကူညီနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.. ဖုန်းနံပါတ်ကို DVB မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်...။ )